I-PRINCE2 Isitifiketi: Isiqondiso Esiphelele - ITS Tech School
7 Septhemba 2017
I-PRINCE2 Isitifiketi: Isiqondiso Esiphelele
I-PRINCE2 isichazamazwi seMisebenzi Ezindaweni Ezilawulwayo. Yindlela yokuphatha iphrojekthi ehleliwe ekuvumela ukuthi uhambisane nazo zonke izinto ezibalulekile zokuphatha iphrojekthi ngempumelelo. Ekuqaleni kwakuhloselwe izindawo ze-IT kuphela, kodwa ihlanganisa zonke izinhlobo zamaphrojekthi nazo zonke ezinye izingxenye zemboni ngokukhululekile. Ekuqaleni, lapho kukhululwa ku-1996, kwakuyi-generic indlela yokuphatha iphrojekthi kodwa manje kuyindlela ejwayelekile yokuphathwa kwephrojekthi eminyangweni eminingi kahulumeni yase-UK namabhizinisi angasese. U-PRINCE2 ugcizelela kakhulu ekuhlukaniseni amaphrojekthi ezigabeni eziningi eziphathekayo nezilawulwa kalula. Isitifiketi se-PRINCE2 singakusiza ngokukhula komsebenzi
Ku-2013, amalungelo wobunikazi we-PRINCE2 adluliselwe kusuka eHM yeHhovisi leKhabhinethi AXELOS Ltd (obunikazi babo babelwe phakathi kweHhovisi leKhabhinethi neCapita plc.).
I-PRINCE2 Certification - Isiqondiso Esiphelele
ISINYATHELO I - PRINCE2 Foundation Training
ISINYATHELO II - PRINCE2 Ukuqeqeshwa Kwabaqeqeshi
Uma ungumuntu onesithakazelo izindima zokuphatha iphrojekthi, isitifiketi se-PRINCE2 singakusiza ngokukhula komsebenzi. Lesi sitifikedi sihilela izinyathelo ezimbili: PRINCE2 Foundation no-PRINCE2 Practitioner. I-PRINCE2 yokuqeqeshwa isitifiketi yokuqeqeshwa ingakulungiselela kokubili futhi ibuye ikujwayelene nesilinganiso se-de-facto esilandelwayo emhlabeni jikelele. Phakathi nokuqeqeshwa koqeqesho, umuntu uthola ubuchwepheshe emiphakathini yokuphatha iphrojekthi kanye nemikhuba emihle njengamazinga ka-PRINCE2.
PRINCE2 iyindlela yokuphatha iphrojekthi eqhutshwa ezimisweni. Iqukethe izimiso eziyisikhombisa, izindikimba eziyisikhombisa nezinqubo eziyisikhombisa.
IZINDABA: Izihloko ziyingxenye ebalulekile yanoma yiliphi iphrojekthi, okumelwe libhekiswe ngokuqhubekayo futhi lixhunyiwe uma kwenziwa iphrojekthi kufanele kuphumelele. Izihloko eziyisikhombisa ziyi:
IZIMISO: Ukuphathwa kweprojekthi kuhilela izimiso eziyisikhombisa ezisezingeni eliphezulu lemikhuba emihle engasetshenziswa kunoma iyiphi iphrojekthi. Izimiso eziyisikhombisa ziyi:
Ukulungiswa Kwebhizinisi Eqhubekayo
Ukufunda kusuka ekuhlangenwe nakho
Izindima ezicacisiwe kanye nezibopho
Ukubheka ukulandela i-Project Environmental
IZINQUBO: Izinqubo eziyisikhombisa yizinyathelo ezibalulekile ezidingekayo zokuphatha, ukuqondisa nokuletha iphrojekthi ngokuphumelelayo. Izinqubo eziyisikhombisa zihlanganisa:
Ukuphatha Ukukhiqizwa Komkhiqizo
Ukuphatha umkhawulo wesiteji
Lezi zimiso nezindikimba ezibalulwe ngenhla kusebenza kulezi zinqubo eziyisikhombisa.
Izizathu eziyinhloko zokuthi kungani kufanele uthole i-PRINCE2 Certification?
Ukuze uthole ukuncintisana okuncintisana phakathi kontanga yakho- Ukuthola isitifiketi se-PRINCE2 ukuqinisekiswa kwamakhono akho njengomphathi wephrojekthi nokukwazi kwakho ukusebenzisa izindlela ze-PRINCE2.
Ukwamukelwa kolwazi lwakho, amakhono namakhono- Kuyinto yokunciphisa ukungakhethi kwamakhono amakhono okuphatha iphrojekthi emhlabeni jikelele.
Imphumelelo- isitifiketi se-PRINCE2 ibonisa amakhono omuntu njengomholi wokuphatha iphrojekthi jikelele.
Amathuba omsebenzi angcono nemali eyengeziwe- Ngalesi siqinisekiso, uzokwazi ukuhlola amathuba emisebenzi angcono. Abanikazi bezitifiketi bangalindela ukwanda kwesilinganiso semholo.
Ukuqhubeka emsebenzini - Ukuthola isitifiketi se-PRINCE2 kubonisa ukulungela kwakho ukuthatha imithwalo yemisebenzi emikhulu.
Ukuthuthukiswa kolwazi namakhono-Ukulungiselela i-PRINCE2certification kudinga ukuthi ufunde futhi ubuyekeze izinqubo zamanje zokuphatha nobuchwepheshe obuqashiwe. Lokhu kugcizelelwa yisitifiketi ohola ngaso.
Ukwandisa ukuzethemba- Ngolwazi, ikhono, amakhono kanye nokuhweba embonini, ngokwemvelo ukwakha umuzwa wokuzethemba futhi uzilungele ukuzichaza ngaphandle kwesihloko somsebenzi.
Bona futhi: I-PMP Certification Career Opportunities
ISIQEPHU I - I-PRINCE2 Foundation Training
Ukuqeqeshwa kwe-PRINCE2 Foundation kugcizelele umbono. Ukuziqhenya ngombono kuqinisekisa ukuthi oshayayo uzizwa eqiniseka ngenkathi enza izicelo ezisebenzayo zokufunda kwe-PRINCE2 enkundleni yezemidlalo. Izimiso, izindikimba nezinqubo kufanele ziqondwe ngokuningiliziwe.
I-Foundation Exam ihlola umuntu ozobhapathizwa ngekhono lakhe lokusebenza njengelungu elolwazi lwethimba lokuphatha iphrojekthi usebenzisa i-PRINCE2. Ukususa ukuhlolwa kuvumela ukuqonda komuntu ozobhalwa ngu-PRINCE2, amagama, izindikimba nezinqubo.
Ekuqedeni ukuqeqeshwa kweSisekelo, ochwepheshe bangakwazi ukwenza okulandelayo ngempumelelo:
Ukuzibandakanya ngenhloso kanye nokuqukethwe kwazo zonke izindima kuzo zonke izihloko eziyisikhombisa, izimiso nezinqubo.
Ukunquma ukuthi yimaphi amaphrojekthi okuphatha ayilungelo lokufaka kanye / noma ukukhipha kulezi zinqubo eziyisikhombisa.
Ukunquma okuqukethwe okuyinhloko nezinhloso zokuqala zemikhiqizo yokuphatha.
Ukusungula ubudlelwane obuphakathi kwezindima, izinqubo, ukulinganisa ukuphathwa nokunikezwa kwephrojekthi.
Ukuhlolwa kohlelo lwesisekelo:
Ifomethi - imibuzo eminingi yokukhetha
Okudingekayo - akukho
Ingqikithi ayikho. yemibuzo - 75
Imibuzo yemibuzo - 5
Amamaki okudlula - 35 (noma i-50%)
Isikhathi sokuhlola: ihora le-1
Uhlobo lwe-Exam - Incwadi evaliwe
ISINYATHELO II - Uqeqesho lwe-PRINCE2
Ngemuva kokuqeqesha okuyisisekelo, isitifiketi sokuqeqeshwa kwe-PRINCE2 Practitioner sigunyaza ukuthi lowo ozobhapathizwa uphumelele ukuqonda ukusetshenziswa kwe-PRINCE2 kumaphrojekthi wangempela. Ngesiqondiso esifanele, lowo ozobhapathizwa uzokwazi ukusebenzisa izindlela ezifundwayo kwiprojekthi ekhona ukuze kwenziwe ngokuphumelelayo.
Ezinye izinhloso zokufunda ze-PRINCE2 zidinga kuphela ezingeni likaPrector. Nakuba ukuhlolwa kweSisekelo kuhlola ulwazi lomuntu ozobhalwa yi-PRINCE2, izinkambiso, izinqubo kanye nezindima, ukuhlolwa koPhrovinsi kuhlola amandla abo okusebenzisa indlela ye-PRINCE2 ngaphansi kwesimo esinikeziwe.
Ngemuva kokuqeda ukuqeqeshwa nokuhlolwa kwe-PRINCE Practitioner, uzokwazi uku:
Ukwenza incazelo ecacile yazo zonke izindikimba, izimiso nezinqubo nezibonelo ezibonisiwe zazo zonke imikhiqizo ye-PRINCE2 yesicelo sokubhekana nesimo seprojekthi ethile.
Ukubonisa ukuqonda ubuhlobo phakathi kwezimiso, izindikimba nezinqubo kanye nemikhiqizo ye-PRINCE2 kanye nekhono lokusebenzisa lokhu kuqonda.
Ukuqonda isisusa sezimiso, izindikimba nezinqubo kanye nokuqonda izimiso ezivela kulezi zici.
Okudingekayo - PRINCE2 Foundation, PMP®, CAPM®, IPMA-D, IPMA-C, IPMA-B, noma i-IPMA-A
Ifomethi - Uhlobo oluhlosiwe, imibuzo ye-8 X Izinto ze-10
Amamaki okudlula - 55%
Uhlobo lwe-Exam - Open book (manual esemthethweni PRINCE2)
Amathiphu okutadisha okubalulekile:
Qoqa izinto ezifanele zokutadisha. Iwebhusayithi esemthethweni ye-AXELOS ingaba usizo kulokho.
Zama ukuxazulula iphepha lesampula noma amabili ukuze uhlaziye izinga lakho nephini ukhomba izindawo zakho ezibuthakathaka. Kuzokusiza futhi ukuba ujwayele ukufometha ifomethi. Iphepha lesampula lingalandwa kusuka kuwebhusayithi esemthethweni ye-AXELOS.
Izindlela noma imikhuba elandelwe enhlanganweni yakho yamanje ingase ingayisizi. Ngakho kungcono ukunamathela ezindleleni ze-PRINCE2 ngenkathi uphendula.
Kuzokusiza ukuthi ufunde amakhono akho.
Ukuqeqeshwa kwe-ITIL e-lake view, eFlorida kusukela ngo-7 kuya ku-9 ngo-Agasti
Ikhishwe i-ITIL Foundation I-Training 16th Sept. - 17th Sept.
Posted on18 Septhemba 2018
Posted on17 Septhemba 2018
Isingeniso ku-GDPR: Ngubani, Nini, Nini, Kungani, Futhi Kuphi I-GDPR
Izinzuzo ze-ITIL Certification & Kungani i-ITIL iyadingeka?
Posted on10 Julayi 2018
Ukuqonda i-Microsoft Dynamics 365
Isidingo sezazi ze-Cyber ​​Security ku-2018
DevOps - Ikusasa le-IT Industries
Kubaluleke kangakanani i-CCNA? Yini okufanele siyazi nge-CCNA?
Ukufezwa nge-AWS Certification